iPhone မှ ဖျက်လိုက်သော ဓာတ်ပုံများ (PC မသုံးဘဲ) ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ။ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
iPhone မှ ဖျက်လိုက်သော ဓာတ်ပုံများ (PC မသုံးဘဲ) ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ။
ဒန်နီရယ် Terrasa | 06/05/2022 21:00 | မက်, လည်ပတ်မှုစနစ်များ
သင့် iPhone တွင် ဓာတ်ပုံများ မတော်တဆ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်လိုက်မိပါသလား။ မထိတ်လန့်ပါနဲ့- ဖြေရှင်းနည်းတွေရှိတယ်။ ဒီ post မှာ ဘာတွေ လုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် PC မပါဘဲဖျက်ထားသော iPhone ဓာတ်ပုံများကိုပြန်လည်ရယူပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ကိရိယာတစ်ခုတည်းမှ ရိုးရှင်းပြီး တိုက်ရိုက်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အိုင်ဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်းသည် ပုံအားလုံးကို ဖမ်းယူသိမ်းဆည်းရန်အတွက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ၎င်းတို့၏ဖုန်းကင်မရာကို အသုံးပြုကြသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် သင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကို အဆုံးသတ်ပါသည်။ ဓာတ်ပုံများနှင့် အမှတ်တရ ရတနာသိုက်. သူတို့ကို ဆုံးရှုံးတာက တကယ့်အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံ ဝမ်းနည်းစရာပင်။
ကြည့်ရှုပါ - WhatsApp တွင်ဖျက်ထားသောဓာတ်ပုံများကိုပြန်လည်ရယူနည်း
သင်သိပြီးသားဖြစ်သည့်အတိုင်း Apple စက်ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ဒေတာများကို မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် ထပ်တူပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်သောကြောင့် လက်၌ရှိသော ကိစ္စရပ်တွင် ကြီးမားသော အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံးသွားသော ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို ပြန်လည်ရယူပါ။. ၎င်းတို့ကို အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်သုံးသပ်သည်-
1 ဖျက်လိုက်သော iPhone ဓာတ်ပုံများကို ပြန်လည်ရယူရန် နည်းလမ်း5ခု
1.1 iPhone ရှိ မကြာသေးမီက ဖျက်ထားသော ဖိုင်ကို စစ်ဆေးပါ။
1.2 အခြားစက်ပစ္စည်းများတွင် ထပ်တူမကျသော ဖျက်မှုများကို ရှာပါ။
1.3 iTunes အရန်ကူးခြင်းသို့ ပြန်သွားပါ။
1.4 ပူးတွဲပါဖိုင်များကို ကြည့်ရှုရန် မက်ဆေ့ဂျ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
1.5 iCloud Backup ကိုသုံးပါ။
ဖျက်လိုက်သော iPhone ဓာတ်ပုံများကို ပြန်လည်ရယူရန် နည်းလမ်း5ခု
ဤအဆင်မပြေသော အခြေအနေမှ သင့်ကိုယ်သင် ကယ်တင်ရန်နှင့် သင့် iPhone မှ ဖျက်လိုက်သော ဓာတ်ပုံများကို ပြန်လည်ရယူရန် အနည်းဆုံး နည်းလမ်းခုနစ်ခုရှိပါသည်။ သင်၏ သီးခြားကိစ္စရပ်ပေါ်မူတည်၍ ဖြေရှင်းချက်ကို သင်ရှာမတွေ့မချင်း နည်းလမ်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကို စမ်းကြည့်နိုင်သည်-
iPhone ရှိ မကြာသေးမီက ဖျက်ထားသော ဖိုင်ကို စစ်ဆေးပါ။
ဓာတ်ပုံများကို မကြာသေးမီက ဖျက်လိုက်လျှင် ဤသည်မှာ သင်ကြိုးစားသင့်သည့် ပထမဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းရှိဖိုင်များကို စီမံခန့်ခွဲနေစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို မှားယွင်းဖျက်ပစ်မိသည်မှာ မကြာခဏဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဤပုံများသည် ဖိုဒါတွင် အလိုအလျောက် ဆုံးသွားပါမည်။ “မကြာသေးမီက ဖျက်လိုက်သည်” (စပိန်ဘာသာဖြင့် "မကြာသေးမီကဖျက်ခဲ့သည်")။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ကို ဖျက်ပြီးနောက် ရက်ပေါင်း 30 ကြာ ကယ်တင်ရန် အသင့်ရှိနေသည့်နေရာတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာရမည့် အဆင့်များမှာ-
ပထမ ဦး စွာငါတို့ဖွင့်လှစ် ဓာတ်ပုံအက်ပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကနေ။
ထို့နောက် ဖိုင်တွဲကို ရှာတွေ့သည်အထိ အောက်သို့ ဆင်းသွားပါ။ "အခြားအယ်လ်ဘမ်များ". ၎င်းအတွင်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခင်ရည်ညွှန်းထားသော ဖိုင်တွဲကို ရွေးပါ- “မကြာသေးမီက ဖျက်လိုက်သည်”။ ဤကျေးဇူးတော် ရက် 30 ကို မကျော်လွန်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်ရယူလိုသော ဖိုင်ကို ထိုဖိုင်တွဲတွင် တွေ့ရပါမည်။
၎င်းကိုပြန်လည်ရယူရန်၊ ဖိုင်ပေါ်တွင်ရိုးရှင်းစွာနှိပ်ပြီး option ကိုနှိပ်ပါ။ "ပြန်လည်နာလန်ထူ"iPhone မျက်နှာပြင်၏ ညာဘက်အောက်ခြေတွင် တည်ရှိသည်။
ရက်ပေါင်း 30 ကာလကျော်လွန်သွားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်ရယူလိုသော ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံများသည် ဤဖိုင်တွဲတွင် မရှိတော့ပါက၊ အောက်ပါနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုကို စမ်းကြည့်ပါ။
အခြားစက်ပစ္စည်းများတွင် ထပ်တူမကျသော ဖျက်မှုများကို ရှာပါ။
iPhone အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အခြားစက်ပစ္စည်းများလည်း ရှိသည့်အတွက် ၎င်းသည် အလွန်လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ iCloud ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် iPads၊ iPod Touch စက်ပစ္စည်းများ၊ MacBooks၊ iTunes ရှိသော Windows ကွန်ပျူတာများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အက်ပ်ကို ထည့်သွင်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ iCloud ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်, ၎င်းသည် iPhone ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများတွင် မူရင်းအတိုင်းရရှိပြီးဖြစ်သည်။
သတိပြုပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone တွင် ဒေတာချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲ ဓာတ်ပုံများကို ဖျက်ထားမှသာ ဤနည်းလမ်းသည် အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။သို့မဟုတ် လေယာဉ်ပျံမုဒ်တွင် ရှိခဲ့သည်။ အဲဒါ သော့ချက်- ဓာတ်ပုံတွေကို ဖျက်ပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့် တခြားချိတ်ဆက်ထားတဲ့ စက်တွေက အဲဒါကို မသိသေးဘူး။ ထို့နောက် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ iPhone ကို အော့ဖ်လိုင်းထားရှိရန်နှင့် ဆုံးရှုံးသွားသော အကြောင်းအရာကို ပြန်လည်ရယူရန် အခြားချိတ်ဆက်ထားသော စက်ကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
iTunes အရန်ကူးခြင်းသို့ ပြန်သွားပါ။
ယခင်နည်းလမ်းနှစ်ခုက အလုပ်မဖြစ်ပါက၊ ဤနည်းလမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားသင့်သည့် နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို သုံးရင် Apple iTunesထပ်တူပြုမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်း၏ အရန်ကူးကို ထိုနေရာတွင် ဖန်တီးပါသည်။
နည်းလမ်းသည် အလုပ်ဖြစ်သည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရသော်လည်း၊ အခြားအရာများထဲတွင်၊ သင်သည် အရန်သိမ်းဆည်းမှုတွင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မမြင်နိုင်၊ သို့မဟုတ် သီးခြားဓာတ်ပုံများကို ပြန်လည်ရယူခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအရာများသည် လိုက်နာရန် အဆင့်များဖြစ်သည်-
အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ USB ကြိုး သုံး၍ ။
ပြီးရင် ငါတို့ဖွင့်တယ်။ iTunes က ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ စက်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ သင်ရွေးချယ်ရပါမယ်။ "အရန်သိမ်းခြင်းကို ပြန်လည်ရယူပါ".
အပြီးသတ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်ရယူလိုသည့် ဓာတ်ပုံများရှိရာ အရန်အရန်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ပူးတွဲပါဖိုင်များကို ကြည့်ရှုရန် မက်ဆေ့ဂျ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
အခြားဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ဆက်မလုပ်မီ၊ ဤတစ်ခုကို စမ်းကြည့်ပါ- ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသော ဓာတ်ပုံများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်ရယူ၍မရသော ဓာတ်ပုံများကို ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည် iMessage သို့မဟုတ် WhatsApp ကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှတဆင့်. သို့ဆိုလျှင်၊ ၎င်းတို့သည် အပလီကေးရှင်းဒေတာကို အသုံးပြု၍ သေချာပေါက် ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသည်။
iCloud Backup ကိုသုံးပါ။
ယခင်နည်းလမ်းများ မအောင်မြင်ပါက ၎င်းသည် သင့်အတွက် အမှန်တကယ် အသက်သွေးကြောတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ သိသာထင်ရှားစွာရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ iPhone ဓာတ်ပုံများကို iCloud သို့ အရန်ကူးပါ။. အကယ်၍ သင်သည် ပြန်လည်ရယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုလွယ်ကူ၍ မရနိုင်သောကြောင့် သင်ကံကောင်းနေပါသည်။
iCloud တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် «ဆက်တင်များ» ပြီးလျှင် option ကိုရွေးပါ «ဗိုလ်ချုပ်"
ထို့နောက် "Reset" option ကိုရွေးချယ်ပြီး "ကိုနှိပ်ပါ။အကြောင်းအရာနှင့် ဆက်တင်များကို ရှင်းလင်းပါ».
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုဖွင့်ပါ။
ထို့နောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖွဲ့စည်းမှုအဆင့်များကို လိုက်နာသည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် သင်သည် option ကိုရွေးချယ်ရန်သာလိုအပ်သည် «iCloud Backup ဖြင့် ပြန်လည်ရယူပါ ».
ယခုအချိန်အထိ အများစုတွင် အလုပ်ဖြစ်မည့် အဖြေများစာရင်း။ မဟုတ်ပါက၊ ပျောက်ဆုံးသွားသောဓာတ်ပုံများနှင့် iPhone ကိုပြန်လည်ရယူရန်နည်းလမ်းများရှိနေသေးသောကြောင့်စိတ်ပျက်မခံပါနှင့်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့သည် အချို့သော အခပေးအက်ပ်များကို အသုံးပြုခြင်း ပါဝင်သည်။ နောက်ပို့စ်တစ်ခုမှာ သူတို့အကြောင်းပြောပါမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » iPhone မှ ဖျက်လိုက်သော ဓာတ်ပုံများ (PC မသုံးဘဲ) ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ။
WhatsApp တွင် spam များကိုမည်သို့ဖယ်ရှားမည်နည်း။
Windows folders တွေရဲ့ နောက်ခံအရောင်ကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။